Deni ayaa sheegay in labada Maamul ee Puntland iyo Koonfur Galbeed ay ku heshiiyeen dhinacyada… – Hagaag.com
Deni ayaa sheegay in labada Maamul ee Puntland iyo Koonfur Galbeed ay ku heshiiyeen dhinacyada…
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa xalay ka qeybgalay xaflad soo dhoweyn ah oo isaga iyo wafdigiisa loogu sameeyay xarunta Madaxtooyada Koonfur Galbeed ee magaaladda Baydhabo.
Madaxweyne Saciid Deni ayaa khudbad uu ka jeediyay xaflada soo dhoweynta ayaa sheegay in Puntland iyo Koonfur Galbeed ku heshiiyeen horumarinta iskaashiga, dhinacyada Amniga, ganacsiga, isdhexgalka Bulsho iyo dowlad dhiska, iyadoo Puntland wixii aqoon dowladdnimo iyo shuruuc ah ku taageerayso Koonfur Galbeed.
“Waxaan u baahanahay in nidaamyada sugida amniga, fulinta sharciga, dhisida kaabayaasha dowladda in la iska kaashado, Puntland waxay ku dhaanto Koonfur Galbeed inay ku taageerto haddii ay ahaan laheyd shuruuc, tababar, taakuleyn inay gacan ka geysato sidii Koonfur Galbeed cagaheeda ugu istaagi laheyd”ayuu yiri Madaxweyne Saciid Deni.
Waxaa uu sheegay in labada maamul ay wadaagaan xiriir ganacsi oo dhow, isagoo xusay in dadka reer Koonfur Galbeed ay ganacsi ballaaran ku leeyihiin Puntland, gaar ahaan Boosaaso, waxaa uu tusaale u soo qaatay in Wasiirka Waxbarashada Koonfur Galbeed uu ku dhashay Boosaaso.
Ugu dambeyn Madaxweyne Deni ayaa uga mahadceliyay Madaxweynaha Koonfur Galbeed soo dhoweynta wanaagsan isaga iyo wafdigiisa loo sameeyay, sidoo kalena waxaa uu ku boggaadiyay kaalinta uu ka qaatay shirarkii ka dhacay Dhuusamareeb iyo Muqdisho oo door wax ku ool ah ku lahaa.